အားလုံးအချိန်ကုန်ဆုံးဆုံးသောအချစ်ဆုံးရုပ်ရှင် 60 - သတင်း
အောင်မြင်သူ ရေရှည်တည်တံ့သောမီးဖိုချောင် မင်္ဂလာဆောင်အလှအပ ကြည့်ရမယ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ လိင်ကိုချစ်တယ် ဒိုင် #actagainstabuse Celeb ကြည့်ပါ နည်းပညာ
အားလုံးအချိန်ကုန်ဆုံးသောအချစ်ဆုံးရုပ်ရှင် ၆၅ ခု
သင်ဝန်ခံချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေလူတိုင်းသည်ကောင်းသောအရာတစ်ခုကိုနှစ်သက်ကြသည် ရင်ခုန်စရာရုပ်ရှင် ။ ဟောလိဝုဒ်မှကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများကိုတွန်းလှန်နေသောပုံပြင်များဖြင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည် ကြယ်တစ်လုံးမွေးဖွားလာသည် ရန် မှတ်စုစာအုပ် ။ ဒါပေမယ့်ဒီသင်တန်းတွေဟာမရေမတွက်နိုင်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေကိုသာခြစ်ရာခြစ်ရာကျတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်တလျှောက်လုံးတွင်အလှဆုံး၊ ပျက်စီးစေသော၊ ဤတွင်အချိန်ကုန်ဆုံးသောအကောင်းဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်း ၆၅ ခုသည်သင့်အားရယ်မောရန်၊ ငိုရန်နှင့်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုယုံကြည်စေမည့်အရာများဖြစ်သည်။
သက်ဆိုင်သော: အချိန်ကုန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်း ၁၀ ခု
Fox Searchlight ရုပ်ပုံများ
၁။ 'Just Wright' (၂၀၁၀)
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဆရာ Leslie Wright (Queen Latifah) သည်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားဖြစ်သူ Scott McKnight (Common) တွင်အလုပ်လုပ်ရန်သူမ၏အိပ်မက်ကိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်သည်။ သူမသည်သူမ၏ over-the-top အမူအရာမှလုံးဝမေ့မေ့လျော့လျော့သောသူမသူမ၏အသစ်သောလူနာ, အဘို့အကျလာသောအခါအမှုအရာတစ် ဦး ရင်ခုန်စရာအလှည့်ယူပါ။
Amazon Prime ကိုကြည့်ပါ
၂။ 'ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်စိတ်ဓာတ်' (၂၀၀၀)
ဒီလှပသေသပ်စွာရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ဟောင်ကောင်မှာပြခဲ့ပြီးအိမ်နီးချင်းနှစ် ဦး ဖြစ်သူ (Tony Leung နဲ့ Maggie Cheung တို့မှပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး) သူတို့ဇနီးမောင်နှံအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်နေပုံ သူတို့ကဒီသစ္စာဖောက်မှုကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအတူတူအချိန်ပိုကုန်ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခံစားချက်တွေပိုဖြစ်လာတယ်။
၃။ 'ကြယ်တစ်လုံးမွေးဖွားသည်' (၂၀၁၈)
နာမည်ကြီးဂီတပညာရှင်ဂျက်ခ် (Bradley Cooper) သည်ရုန်းကန်နေရသည့်အနုပညာရှင် Ally (Lady Gaga) ကိုမတော်တဆရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါသူသည်သူမအားမီးမောင်းထိုးပြပြီးသူ၏အလုပ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်မည်သည့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအချစ်ဇာတ်လမ်းမဆိုကဲ့သို့ပင်၊
ငါလည်းကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ သူမကိုချစ်ဖို့ပြောနေတယ်။ Gah, ငါတို့တောင်မှမည်မျှ cheesy ဂရုမစိုက်ပါဘူး, တစ် ဦး ချစ်စရာကောင်းအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် (Hugh Grant) နှင့်ကျော်ကြားသောအမေရိကန်မင်းသမီး (ဂျူလီယာရောဘတ်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူ့ကိုယ်သူကစား) အကြောင်းကိုစင်ကြယ်သော rom-com ကိုရွှေဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဘတ်စကက်ဘော (၂၀၀၀)
Monica (Sanaa Lathan) နှင့် Quincy (Omar Epps) တို့သည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်နှင့်အတူငယ်စဉ်ကလေးဘဝသူငယ်ချင်း ၂ ခုဖြစ်ကာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်ရင့်ကျက်သောအလုပ်အကိုင်များအကြားရွေးချယ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းခံရသောကြောင့်ရုပ်ရှင်သည်သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာခရီးဆက်ခဲ့သည်။
၆။ 'တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ' (၂၀၀၃)
ကြယ်တစ်ပွင့် (Hugh Grant နှင့် Colin Firth တို့ပါဝင်သည်) သည်သူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘ ၀ ကိုရယ်မောခြင်းနှင့်မျက်ရည်များစီးကျခြင်းနှင့်အတူရောနှောသွားကြသည်။ Plus အား, ငါခရစ္စမတ်အဘို့ငါလိုခငျြ Mariah Carey ရဲ့အားလုံး၏မော်ကွန်းအဖုံးရှိပါတယ်။ '' (သို့သော်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဤအရာကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။ )
သက်ဆိုင်သော: အင်တာနက်ပေါ်တွင်အခက်ခဲဆုံး 'အမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ' ပဟေizိ
၇။ 'တစ်ညဖြစ်ခဲ့တာ' (၁၉၃၄)
ဒီဟောင်းနွမ်းပေမယ့်ဂူရီဟာသူမမိသားစုကိုစွန့်ခွာကာသူမကိုကူညီလိုသောချစ်စရာကောင်းတဲ့လူ (Clark Gable) နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောအမွေဆက်ခံသူ (Claudette Colbert) ပတ်ပတ်လည်တွင်တည်ရှိသည်။ snag? ကြင်နာတတ်တဲ့သူစိမ်းတစ်ယောက်ဟာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုရှာဖွေနေတဲ့သတင်းထောက်တစ်ယောက်ပါ။ ဤသည်မှာအဓိကအကယ်ဒမီဆုငါးဆု (အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံ၊ ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ဆောင်၊ သရုပ်ဆောင်နှင့်ဇာတ်ညွှန်း) ကိုပထမဆုံးရရှိသောပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
၈ 'လရောင်' (၂၀၁၆)
ဒါဟာသူ့ဘဝ၏ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကြီးသုံးခု၌လူမည်းလူငယ်တစ် ဦး ၏နောက်လိုက်ဖြစ်သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်တွင်သူသည်သူ၏လိင်မှုကိစ္စကိုမေးခွန်းထုတ်သည်၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံ၍ အချစ်၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုသိရှိလာသည်။ အကောင်းဆုံးပုံအတွက်အော်စကာဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သလား။ (တောင်းပန်ပါတယ်၊ La La Land ။ )
၉ ။ 'Amélie' (၂၀၀၁)
အမေရီ (Audrey Tautou) သည်ငယ်ငယ်လေးကလေးစားစရာကောင်းသောမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးပါရီမြို့၏အလယ်ပိုင်းသို့စားပွဲထိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန်ပြောင်းရွှေ့သောအခါသူသည်ယခင်တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်သူဟောင်း၏ပိုင်ဆိုင်ရာပျောက်ဆုံးနေသောဘဏ္versာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသူမ၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများကိုကူညီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ။ သူမသည်သူမ၏ပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ်ဖြစ်နိုင်သည့်အရာကိုအပါအဝင်လမ်းတစ်လျှောက်ရောင်စုံဇာတ်ကောင်အများကြီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ချစ်စရာကောင်းပျော်စရာနှင့်လက်ငင်းဂန္။
၁၀။ Ghost (၁၉၉၀)
ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်သည်ကမ္ဘာပေါ်သို့အင်အားမဲ့သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့်သူမ၏ချစ်မြတ်နိုးသောခင်ပွန်းဆမ်ဂျုံ (ပက်ထရစ်ဆွိုင်ဇာ) ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသောအနုပညာရှင် Molly Jensen (Demi Moore) ၏နောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ သငျသညျ Moore က, Swayze နှင့်အချို့သောရှုပ်ထွေးရွှံ့နှင့်အတူကြောင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုမြင်ရပါတယ်သည်အထိသင်ရုံနေထိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
Bolen / NETFLIX ကျော်သွားပါ
၁၁။ 'The Lovebirds' (၂၀၂၀)
မကွဲခင်ခဏလေးမှာ Leilani (Issa Rae) နဲ့ Jibran (Kumail Nanjiani) တွေဟာလူသတ်မှုအစီအစဉ်မှာမတော်တဆဖြစ်လာတယ်။ သူတို့ဟာနာမည်ပျက်စာရင်းရှင်းဖို့အတွက်ခရီးစတင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်။ သူတို့မသေချာမရေရာသည့်အခြေအနေများအတွင်းသူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုကယ်တင်နိုင်ပါသလား။
၁၂။ 'အရာရှိနှင့်လူကြီးလူကောင်း' (၁၉၈၂)
စဉ်တွင် မိန်းမချောလေး ဤသည်ရစ်ချတ်ဂရီသည်ရေတပ်ရှေ့ပြေးသင်တန်းကိုပြီးဆုံးသောလူငယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ချစ်ခြင်းနှင့်လူသားတို့၏ကြီးထွားမှုကို ပို၍ ရင့်ကျက်သောအကြည့်နှင့်ပြည့်စုံသော rom-com ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ တစ်ရှုးများကိုအသင့်အနေအထားတွင်ထားပါ။ နောက်မှကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
Warner Bros. ရုပ်ပုံများ
အခြားသူများကကြိုးစားခဲ့ကြသော်လည်းမည်သည့်ရုပ်ရှင်ကားမျှ Ilsa နှင့် Rick (Ingrid Bergman နှင့် Humphrey Bogart) ကဲ့သို့သောအထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်ခဲ့ကြပေ။ နှစ်ပေါင်းများစွာအဆက်အသွယ်မရှိခဲ့သည့်လမ်းများမှဖြတ်သန်းသွားသောမီးဘေးဟောင်း ၂ ခုအကြောင်းကိုဤစစ်အတွင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။ (အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရုပ်ရှင် FTW ။ )
14. 'Basmati ချယ်လ်ဆီးအသင်း' (2017)
သိပ္ပံပညာရှင်လူငယ် Linda (Brie Larson) သည်မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောဆန်များကိုရောင်းချရန်အိန္ဒိယသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူမက၎င်းသည်အလုပ်များကိုဖျက်ဆီးလိမ့်မည်ဟုသိလိုက်ရသောအခါသူသည်ကိစ္စရပ်များကိုပြုပြင်ရန် Rajit (Utkarsh Ambudkar) အမည်ရှိဒေသခံလယ်သမားနှင့်ပူးပေါင်းသည်။
၁၅။ အချစ်ဇာတ်လမ်း (၁၉၇၀)
ဤဇာတ်ကား၏ကျော်ကြားသောနောက်ဆုံးလိုင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တက်နိုင်မည်ကိုမသေချာပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာမလို (ဆိုလိုသည်မှာမဟုတ်)၊ သို့သော်ဤ '၇၀ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာဂန္ထဝင်သည်ထိုညများအတွက်သင်အလိုရှိလျှင် တကယ်ကောင်းသောအရုပ်ဆိုးအော်ဟစ်သောအသံသည်။
သက်ဆိုင်သော: ၁၀ ကြိမ်မြောက်တီဗွီ ၁၀ လုံးသင်အော်ငိုလိုသည့်အခါကြည့်ရှုနိုင်သည်
၁၆ 'အသစ်သောအရာ' (၂၀၀၆)
ကင်ညာ (Sanaa Lathan) သည်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောလူနှစ်ယောက်စပ်ကြားကိုက်ဖြတ်နေသည်။ (အကျွမ်းတဝင်အသံ?) သူမသည်သူ၏ suitor Black ကမဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်ပြီးနောက်သူမမျက်စိကန်းသောနေ့စွဲထဲက backs သောအခါအားလုံးစတင်သည်။ သူမအတိတ်ကဘက်လိုက်မှုတွေကသူမကိုသူမစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရှာမတွေ့အောင်တားဆီးပေးမလား။
၁၇။ ၁၉၆၁ ခုနှစ် Tiffany's တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်သည်။
သူများသည်ပုလဲ, Givenchy LBD နှင့်အထင်ကရ '' - ဒီဂန္တစ် ဦး တည်း Holly Golightly ရဲ့ (Audrey Hepburn) ငြူစူသောစိတ်စတိုင်ကိုကြည့်ရကျိုးနပ်သည်။ သို့သော် Truman Capote ၏ကျော်ကြားသောဝတ္ထုကိုအခြေခံထားသောဤဇာတ်လမ်းတွင်အခြားဟာသများ၊ ဟာသများ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းများနှင့်အလွန်ကောင်းသောအရှေ့ပိုင်းဘေးထွက်နေရာများရှိသည်။
အဆိုပါ Weinstein ကုမ္ပဏီ
၁၈။ 'Blue Valentine' (၂၀၁၀)
အချို့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းများကိုသင်၏ S.O. နှင့် တွဲဖက်၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအဘို့သင့်မေတ္တာထပ်မံအတည်ပြု။ ဤကဲ့သို့သောအခြားသူများကိုတစ်ယောက်တည်း (သို့မဟုတ်သင်၏အကောင်းဆုံးနှင့်အတူ) ပို၍ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Ryan Gosling နှင့် Michelle Williams တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့်ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုအကြောင်းခါးသီးသောချိုသာသောသရုပ်ဖော်ချက်ဖြစ်သည်။
စာရာ Shatz / Netflix
၎င်းသည်အဆုံးတွင်အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်သော်လည်းဤရုပ်ရှင်သည်သူမ၏ရည်းစားကစွန့်ပစ်ခံရသောမိန်းကလေး (Gina Rodriguez) ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုသို့မပြောင်းမီသူမ၏အနီးကပ်ဆုံးချစ်သူမိန်းကလေးများနှင့်အတူနောက်ဆုံးခန်းမတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။
Buena Vista ရုပ်ပုံများ
၂၀။ 'Beauty and the Beast' (၁၉၉၁)
ဒီဆွဲဆောင်မှုရှိသောလက်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသည့်ဒစ္စနေးကာတွန်းကားသည်အသက်အရွယ်တိုင်းအတွက်ဂန္ထဝင်ဖြစ်သည်။ ညီတူညီမျှကော? သားရဲအဖြစ် Emma Watson သရုပ်ဆောင်သည့် 2017 ဇာတ်ကား။ Live-action ဗားရှင်းသည်နတ်သမီးပုံပြင်ကိုခေတ်သစ်အမျိုးသမီးလှည့်ကွက်မှပေးသည်။
Disney + တွင်ကြည့်ပါ
အမေဇုံစတူဒီယို / Lionsgate
၂၁ 'လူနာကြီး' (၂၀၁၇)
ဤသည်သင်၏စံ rom-com မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအစား၊ (Kumail Nanjiani နှင့် Emily Gordon ရဲ့ IRL အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံပြီး) ဒီရယ်စရာကောင်းပြီးစမတ်ရုပ်ရှင်သည်ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံသောအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာပြီးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ဖွားကာတွန်းဆရာ Nanjiani (သူကိုယ်တိုင်ကစားသည်) သည်ကျောင်းသူ / သား Emily Gardner (Zoe Kazan) အတွက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူမသည်မေ့မြောနေသောရောဂါတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရသည့်အခါ Kumail သည်သူ၏မိဘများ၊ သူ့မိသားစုနှင့်သူ၏ခံစားချက်အမှန်ကိုရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး blackhead remover
22. '' Focus '(2015)
ဝါရင့် con အနုပညာရှင် (Will Smith) ကသူ၏တောင်ပံအောက်တွင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော (Margot Robbie) ကိုယူသောအခါ၊ သူမသည်သူမနှင့်ကွဲသွားပြီး femme fatal ဖြစ်လာသည်အထိဖြစ်သည်။ streaming တန်းများထဲသို့ပေါင်းထည့်သည် *
၂၃ 'အနောက်ဘက်ခြမ်းပုံပြင်' (၁၉၆၁)
အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင်ဂိုဏ်းနှစ်ခုဖြစ်သောငါးမန်းနှင့်ဂျက်လေယာဉ်များသည်ရပ်ကွက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်။ ဂျက်စ်အဖွဲ့ ၀ င်တိုနီ (ရစ်ချတ်ဘေမာ) သည်ငါးမန်းခေါင်းဆောင်၏ညီမမာရီယာ (နာတာလီဝုဒ်) အတွက်အကျိုးရှိသည်။ ယနေ့ခေတ် Romeo နှင့် Juliet တို့သည်တေးသီချင်းများဖြင့်တီးခတ်နေကြသည်။
၂၄ 'ရောမအားလပ်ရက်' (၁၉၅၃)
မိတ်ဆက်ပေးခြင်း Audep Hepburn သူမ၏အုပ်ထိန်းသူများမှလွတ်မြောက်ပြီးရောမမြို့ရှိအမေရိကန်သတင်းသတင်းထောက် Gregory Peck ကိုချစ်မြတ်နိုးသည့်မင်းသမီးအကြောင်းပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ချစ်စရာကောင်း, နှစျလိုဖှယျနှင့်တစ် ဦး မဖြစ်မနေ - စောင့်ကြည့်ပါတယ် ဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင် ပရိတ်သတ်တွေ။
25. '' The Photograph '(2020)
မယ်တော် (Issa Rae) မိခင်မမျှော်လင့်ဘဲသေဆုံးသောအခါသူသည်မရေမတွက်နိုင်သောမေးခွန်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူမ၏ကွယ်လွန်သူမိခင်၏ဓာတ်ပုံဟောင်းကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်သူမမိသားစုသမိုင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်လေ့လာခဲ့သည်။ Issa Rae မှာမင်းကိုငါတို့ရှိတယ်။
Fox Searchlight ရုပ်ပုံများ / Miramax ရုပ်ရှင်
26. 'ဥယျာဉ်ပြည်နယ်' (2004)
Zach Braff သည်ဤချိုမြိန်ပြီးအထိခိုက်မခံသောရုပ်ရှင်၌သူ၏မိသားစုမှခွဲထွက်ပြီးသည့်နောက်သူ၏မိခင်အသုဘအခမ်းအနားအတွက်နယူးဂျာစီရှိသူ၏ဇာတိမြို့သို့ပြန်လာသည့်စိတ်သောကရောက်နေသည့်လူငယ် (Andrew) အကြောင်းရိုက်ကူးခဲ့သည်။ Natalie Portman သည်အခြားထူးခြားသောဇာတ်ကောင်များနှင့်လူသတ်သမားတေးသံများနှင့်အတူထူးဆန်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသသည်။
၂၇ 'မှတ်စုစာအုပ်' (၂၀၀၄)
အိုး။ ကျွန်တော်တို့ဟာဒီဂန္ထဝင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လမ်းပြန်လျှောက်ရန်အလေးသာမှုများကိုရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့စုံတွဲတစ်တွဲအကြောင်းပါရှိသည်။ နော ((Ryan Gosling) အော်နေသောထိုမြင်ကွင်းကသင်ဘာလိုချင်သနည်း။ at Allie (Rachel McAdams) သည်အမြဲတစေသံစုံတီးခတ်မည်။
၂၈ 'အချိန်အကြောင်း' (၂၀၁၃)
နောက်ကွယ်ကလူမှ တကယ်တော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, Notting Hill နှင့် Bridget ကဂျုံးစ်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ သူသည်အချိန်ခရီးသွားနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းကိုသိသောလူငယ်တစ် ဦး နှင့် ပတ်သက်၍ ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ထွက်ပေါ်လာသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမြတ်နိုးဖို့အံ့သြဖွယ်သတိပေးချက် (နှင့်ရာခေလသည် McAdams အရာအားလုံးအတွက်အံ့သြဖွယ်ကြောင်း) ။
StudioCanal / The Weinstein ကုမ္ပဏီ
၂၉ 'ကာရယ်လ်' (၂၀၁၅)
'50s အတွက်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျကြသူအမျိုးသမီးနှစ် ဦး အကြောင်းကိုဒီ melodrama လှပသောထွင်းထုခြင်းနှင့် subtext နှင့်လေထုအပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်။ Therese Belivet (Rooney Mara) သည်စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ကာရယ်လ် (Cate Blanchett) ကိုတွေ့သောအခါကျန်သည်သမိုင်းဖြစ်သည်။
၃၀ 'အပြစ်ဖြေခြင်း' (၂၀၀၇)
သငျသညျစဉ်အတွင်းမျက်နှာပြင်ကနေသင်၏မျက်စိကိုက်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ သော James McAvoy၊ Keira Knightley (နှင့်သူမ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အစိမ်းရောင်စားဆင်ယင်) နှင့်အတူစာကြည့်တိုက်ရှိမြင်ကွင်းတစ်ခု။ ဒီချစ်သူနှစ် ဦး ကိုမိသားစု ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဖြင့်ကွဲထွက်သွားပြီးမကြာမီ၊
၃၁။ 'အစက်မရှိသောစိတ်၏ထာဝရနေရောင်ခြည်' (၂၀၀၄)
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောပြိုကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ပြဇာတ်ရုံများ၌ရိုက်နှက်ခဲ့သောစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောစိတ်ကူးယဉ်ဟာသဒရာမာတွင်စိတ်မချမ်းမြေ့ဖွယ်ဇနီးမောင်နှံ (Jim Carrey နှင့် Kate Winslet) သည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးအမှတ်တရများကိုဖျက်ပစ်ကြသည်။ သိတယ်
32. 'တိုက်တန်းနစ်' (1997)
ကျနော်တို့ကဒီပြဇာတ်ရုံထဲမှာမြင်သောဝန်ခံဖို့ရှက်ကြောက်မဟုတ်ပါဘူးနှစ်သုံးကြိမ်။ ၎င်းသည်မည်သို့အဆုံးသတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသော်လည်း (လုယူသူ - သင်္ဘောနစ်မြုပ်သွားသည်) ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးများမှာငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်ဆက်သွားပါဂျက်နှင့်နှင်းအတူတကွကခုန်ခြင်းနှင့်ဝတ်လစ်စလစ်ပုံဆွဲပုံဆွဲတိုင်းအချိန်တိုင်းတွင် ၀ မ်းမြောက်စွာခုန်ချနိုင်သည်
Sony Pictures ဂန္ထဝင်
၃၃။ 'သင်၏အမည်ဖြင့်ငါ့ကိုခေါ်ပါ' (၂၀၁၇)
တစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်သူ၏ဖခင်၏သုတေသနလက်ထောက်အကြားဤအပွင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ပုံ - ပြီးပြည့်စုံသော 1980 ခုနှစ်အီတလီမှာနေရာတစ်နေရာကြာပါသည်။ André Aciman ရေးသားထားသောဝတ္ထုကို အခြေခံ၍ မမယုံကြည်နိုင်လောက်သောTimothée Chalamet နှင့် Armie Hammer သရုပ်ဆောင်ထားသောအချစ်၏ပုံပြင်။ နောက်ထပ်ပြောစရာရှိလား။
34. 'Crazy သူဌေးအာရှသားများ' (2018)
Kevin Kwan ၏ ၂၀၁၃ ရောင်းအားနှင့်တူညီသောအမည်ကိုအခြေခံထားသည့်ဤဟာသဇာတ်လမ်းသည်အာရှမှသရုပ်ဆောင်များနှင့်အဖွဲ့ ၀ င်အများစုပါဝင်သည့်ပထမဆုံးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်မှုကလပ် 1993 ခုနှစ်တွင် (NBD) ။ နယူးယောက်သူ Rachel Chu (Constance Wu) မှသူမရည်းစား Nick Young (Henry Golding) နှင့်စင်ကာပူရှိအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့သူမနှင့်အတူလိုက်ပါလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုက်ရောက်လာသောအခါနစ်ခ်သည်သူဌေးကြီးဖြစ်ရုံသာမကနိုင်ငံ၏အရည်အချင်းပြည့်မီသောဘွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်ကိုသူမလေ့လာခဲ့သည်။ ရာခေလသည်ဤစည်းစိမ်နှင့်ကျော်ကြားမှုနှင့်ပြည့်စုံသောဤကမ္ဘာသစ်နှင့်သူ၏သဘောမတူသောမိခင်ကိုမည်သို့လမ်းပြမည်နည်း။
၃၅။ 'အပြာရောင်သည်အနွေးဆုံးအရောင်' (၂၀၁၃)
အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် Adle (Adèle Exarchopoulos) သည်ဆံပင်ဖြူသော Emma (Léa Seydoux) နှင့်တွေ့သောအခါသူမအတွင်း၌တစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်းပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသောရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်အားထက်သန်သောပြင်သစ်အချစ်ဇာတ်လမ်းသည်အသက်အရွယ်မရွေးပရိသတ်များကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။ (မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဒါဟာသုံးနာရီကြာတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့အချိန်ဇယားအတိုင်းအချိန်လုံလုံလောက်လောက်ထုတ်ပေးပါ။ )
၃၆။ 'မတိုင်မီကကျွန်ုပ်ချစ်ခင်ခဲ့သောယောက်ျားလေးများအားလုံးအတွက်' (၂၀၁၈)
Lara Jean (Lana Condor) သည်မိမိကိုယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သဖြင့်သူမ၏ဗီရိုထဲတွင်သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသူမ၏ခံစားချက်များကို ၀ န်ခံခဲ့သည်။ သူမ၏ညီမ (အန်နာကက်စကတ်) သည်ထိုစာများကိုမတော်တဆစာပို့လိုက်သောအခါပျော်ရွှင်စရာဖြစ်လာသည်။
၃၇ 'Bridget Jones ၏ဒိုင်ယာရီ' (၂၀၀၁)
သူမသည်ကျိန်ဆဲခြင်း၊ ရုန်းထွက်ခြင်းနှင့်ရယ်မောခြင်းများကိုကြိုက်နှစ်သက်သည့်ရယ်စရာကောင်းသောရယ်စရာကောင်းသော Bridget Jones (Renée Zellweger) သည်သူမနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းနှစ်ခုကိုထွက်ပေါ်စေသည့်ဤတွန်းလှန်ဟာသ၌ရှိသကဲ့သို့ အငြင်းအခုန်တက်နေဆဲဖွင့်မယ့်အရာတစုံတခုရှိပါက: သင် Darcy သို့မဟုတ်အဖွဲ့ Cleaver သလား (လှည့်ကွက်မေးခွန်း: Darcy, သိသာတဲ့။ )
38. '' Beale လမ်းစကားပြောနိုင်လျှင် '' (2018)
Tish နှင့် Alonzo (Fonny) တို့သည်ကလေးဘဝကတည်းကသူငယ်ချင်းများဖြစ်ခဲ့ကြပြီး Fonny အားသူမကျူးလွန်သောရာဇဝတ်မှုဖြင့်အဖမ်းခံရချိန်၌သူတို့၏အနာဂတ်အတွက်အစီအစဉ်များပျက်ပြယ်သွားသည်။ ဒီရွေ့လျားနေတဲ့လှုပ်ခတ်မှုဟာ Harlem မှာ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကစပြီးစုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ပြတ်တောက်နိုင်တဲ့နှောင်ကြိုးနဲ့သူတို့အတူတကွပေါင်းသင်းဖို့ကျော်လွှားရမယ့်အတားအဆီးတွေကိုဗဟိုပြု။ လှပတင့်တယ်လှပတဲ့ရိုက်ချက်လေးတစ်ခုနဲ့တွေ့ရမှာပါ။
39. 'Dirty Dancing' (1987)
Frances 'Baby' Houseman (Jennifer Grey) သည်သူ၏မိသားစုနှင့်အတူ Catskills အပန်းဖြေစခန်း၌နွေရာသီကုန်သောအခါသူသည်စခန်း၏မကောင်းသောယောက်ျားလေးအကသမားနည်းပြဂျော်နီရဲတိုက် (ပက်ထရစ်ဆွိုင်ဇာ) ကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ အံ့သြစရာအနည်းငယ်သာရှိသောဂန္ထဝင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ရှုမည် အဲဒီဓာတ်လှေကား
၄၀။ 'ကျွန်ုပ်တို့၏ကြယ်များအတွင်းရှိအမှား' (၂၀၁၄)
သင်စဉ်အတွင်းငိုရပ်တန့်နိုင်ဘူးဆိုရင် သတိရဖို့တစ်လမ်းလျှောက် ဤသည်ကားသင်တို့အတွက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာလူနာနှစ် ဦး အားကြည့်ရှုသူများကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောအချစ်ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည့် Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) နှင့် Gus Waters (Ansel Elgort) ဖြစ်သည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်ပါ။
41. 'တစ်နေ့' (2011)
သေချာတာပေါ့၊ David Nicholls ရဲ့ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီနာမည်နဲ့တူညီတဲ့နာမည်ကိုဒီရုပ်ရှင်ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး အကောင်းဆုံး (အထူးသဖြင့်အန်းဟတ်သ်ဝေး၏အသံထွက်သည်အတော်အတန်များပြားသည်။ သို့သော် Dex နှင့် Emma ကို ၁၈ နှစ်ကျော်ကြာအတူတူပင်တစ်နေ့တည်းတွင်တွေ့ဆုံသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မချစ်နိုင်ပါ။
Walt Disney စတူဒီယို Motion Pictures
42. 'အဆိုပါအဆိုပြုချက်ကို' (2009)
မာဂရက်တိတ် (စန်ဒရာ Bullock) သည်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီ၏အကြီးအကျယ်အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်ပြီးအင်ဒရူးပါစတန် (Ryan Reynolds) သည်သူမအလုပ်ကြိုးစားသောလက်ထောက်ဖြစ်သည်။ မာဂရက်သည်ကနေဒါသို့ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခံရချိန်တွင်သူသည်ဗီဇာအဆင့်အတန်းကိုထိန်းသိမ်းရန်အင်ဒရူးကိုလက်ထပ်ရန်အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမင်းခန့်မှန်းနိုင်မယ်ထင်တယ်။
43. 'Brokeback Mountain' (၂၀၀၅)
Cowboys နှစ်ခုအကြားရှိလျှို့ဝှက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပတ်သက်သောဤရွေ့လျားနေသောပုံပြင်သည်အစွမ်းထက်။ ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းသော၊ ဤဇာတ်လမ်းသည်ဂျက်ဆပ် (Jake Gyllenhaal) နှင့်သူ၏မွေးမြူရေးခြံတွင်အလုပ်လုပ်ရန် Ennis Del Mar (Heath Ledger) ကိုငှားရမ်းထားသောဂျိုး Aguirre (Randy Quaid) အမည်ရှိ rancher အကြောင်းအဓိကအာရုံစိုက်သည်။
44. 'အခါဟယ်ရီလီတွေ့ဆုံခဲ့' '(1989)
Meg Ryan၊ Nora Ephron နှင့် Big Apple တို့ပွဲသည် rom-com ကောင်းကင်၌ပြုလုပ်သောပွဲများဖြစ်သည်။ ဒါဟာယောက်ျားမိန်းမတို့မိတ်ဆွေများက - သို့မဟုတ်သူတို့မဖွစျနိုငျကွောငျးယုံကြည်စိတ်ချနေသောဇာတ်ဆောင်နယူးယောက် (Billy Crystal ပါဝင်သည်) ၏တရံအကြောင်းကိုကြည်နူးဖွယ်ရုပ်ရှင်?
၄၅။ 'ငါတို့လမ်းစဉ်' (၁၉၇၃)
သင်သိရန်လိုအပ်သည်မှာ Barbra Streisand သည်ဤဆန့်ကျင်ဘက်များမှကြယ်များသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းဖြစ်ပေါ်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဆွဲဆောင်သည်။ အိုကေကောင်းပါတယ်၊ ရောဘတ်ရက်ဖော့ဒ်သည်လည်းရုပ်ရှင်ထဲတွင်သရုပ်ဆောင်ရပြီး၎င်းသည်ငြင်းစရာအကြောင်းမရှိချေ။ ပြီးပါပြီ။
46. ​​'နေထွက်မီ / နေဝင်ချိန်မတိုင်မီ / ညသန်းခေါင်မတိုင်မီ' (1995/2004/2013)
ပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်၌အမေရိကန်လူမျိုး Jesse (Ethan Hawke) နှင့်ပြင်သစ်အမျိုးသမီးCéline (Julie Delpy) တို့သည်ရထားပေါ်တွင်တွေ့သည်၊ ဗီယင်နာသို့ထွက်ခွာ။ တစ်ညလုံးလမ်းလျှောက်ကာစကားပြောခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတွဲသည်ကိုးနှစ်ကြာပြီးနောက်ပါရီမြို့၌၎င်း၊ နောက်ကိုးနှစ်အကြာတွင်ဂရိနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သငျသညျတစ်ခုလုံးကိုတနင်္ဂနွေဘေးဖယ်ထားအပေါင်းတို့နှင့်စောင့်ကြည့်ချင်တာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ပါ။
47. 'The English Patient' (၁၉၉၆)
Michael Ondaatje ၏ဝတ္ထုသစ်များဖြစ်သော Ralph Fiennes နှင့် Kristin Scott Thomas တို့သည်ဤဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမြောက်အာဖရိကတွင်ကံမကောင်းသောချစ်သူများဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ၆၉ ကြိမ်မြောက်အကယ်ဒမီဆုကိုဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအပါအ ၀ င်ကိုးဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ သငျသညျအဆုံးအားဖြင့် bawling မဟုတ်ပါဘူးလျှင်, သင်နဂါးပါပဲ။ နောက်နေတာပဲ (အမျိုးအစား။ )
၄၈ 'ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၏မင်္ဂလာဆောင်' (၁၉၉၇)
ဂျူလီယာရောဘတ်သည်ဤ screwball အချစ်ဇာတ်လမ်း၌သူမ၏ပုံမှန်အားဖြင့်ချစ်စရာကောင်းသောမိမိကိုယ်ကိုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကြည့်ရှုရန်ထိုက်တန်သောရုပ်ရှင်၏အံ့သြစရာကောင်းသောကြံစည်မှုလှည့်ကွက်ဖြစ်သည်။ အိုး, ငါတို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုမေ့နိုင်ဘူး ah-mazing သီခငျြးဆိုပါတယျ Aretha Franklin ရဲ့ငါဆုတောင်းပဌနာနည်းနည်း။
49. 'Like Crazy' (၂၀၁၁)
မင်းရဲ့ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုသင်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကဗြိတိသျှကောလိပ်ကျောင်းသား (Felicity Jones) နဲ့သူမရဲ့အမေရိကန်အတန်းဖော် (Anton Yelchin) အတွက်သူမကဗီဇာစည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ပြီးသူတို့ခွဲထုတ်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကကြေကွဲဖွယ်အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုပါ။ အကယ်၍ ရုပ်ရှင်သည်စစ်မှန်သောဘဝကိုခံစားရပါက၎င်းသည်များစွာသောတီထွင်ကြံဆမှုကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
သူစိမ်းနှစ်ယောက် (Scarlett Johansson နှင့် Bill Murray) တို့သည်တိုကျိုရှိဟိုတယ်ဘားတွင်တွေ့ဆုံပြီးနောက်မဖြစ်နိုင်သည့်နှောင်ကြိုးတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်သင်အနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်တွင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်မှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောရွေ့လျားနေသော (နှင့်တစ်ခါတစ်ရံရယ်မောဖွယ်ကောင်းသော - ရယ်စရာကောင်းသော) ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ကိတ် (အမလီယာကလာ့ခ်) သည်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီး၌တစ်နှစ်ပတ်လုံး elf အဖြစ်အလုပ်လုပ်သောသူမ၏အလုပ်ကြောင့်ပင်ပန်းသည်။ သူမသည် Tom အမည်ရှိသော Tom (Henry Golding) နှင့်တွေ့သောအခါခရစ်စမတ်၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုရုတ်တရက်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Alexa, Spotify မှာ 'Last Christmas' ကိုကစားပါ။
ကက် Stratford (ဂျူလီယာ Stiles) နှင့်သူမ၏ညီမ Bianca (Larisa Oleynik), တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကနေပိုပြီးကွဲပြားခြားနားဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အဖေ (Larry Miller) ကအိမ်ထောင်စုစည်းမျဉ်းကိုတီထွင်ပြီး Kat ဟာရည်းစားမထားမချင်း Bianca ကိုမချိန်းတွေ့နိုင်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏, သင်တန်း, နောက်ခံ။
ရီကာဒို Hubbs / Netflix
၅၃ ။''အချစ်, အာမခံချက်''(၂၀၂၀)
နစ်ခ် (Damon Wayans Jr. ) သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် ၁၀၀၀ တွင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူသည်တစ်ကိုယ်ရေနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်အောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားသောချိန်းတွေ့ခြင်း app ကိုတရားစွဲရန်ရှေ့နေတစ် ဦး ကိုငှားသည်။ ဟောကိန်းထုတ်ထားသည့်အတိုင်းနစ်ခ်သည်အနည်းဆုံးမျှော်လင့်သောအခါချစ်ခြင်းမေတ္တာမကြာမီတွေ့ရှိရသည်။ (ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါ့အပြင် Rachael Leigh Cook ကိုလည်းသရုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ )
နေဝင်ချိန် Boulevard / Getty Images
သူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသော်လည်းသူ၏ဖခင်ဖြစ်သူ Sally Field မှ Forrest Gump (Tom Hanks) သည်ကြင်နာပြီးအကောင်းမြင်သောလူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သေချာတာပေါ့, ဒါငရဲအဖြစ်ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကောင်းတဲ့အရာကတော့ချောကလက်တစ်ဘူးနဲ့နာကျင်မှုကိုလုံးဝသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
ကယ်ရီ Brown / NETFLIX
လက်ထပ်ပြီးခါစလူငယ်လေး (လီလီဂျိမ်းစ်) သည်သူမ၏ခင်ပွန်း၏မိသားစုအိမ်ခြံမြေကိုသွားရောက်လည်ပတ်ကာအင်္ဂလိပ်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ပြဿနာ? သူမသည်အဘယ်သူ၏အမွေလက်တွေ့နေထိုင်ရာ၏နံရံများသို့ရေးထားလျက်ရှိ၏သူမ၏ခင်ပွန်း၏ဇနီးဟောင်းရေဗက္ကာ, အကြောင်းကိုမေ့လျော့ဖို့မထင်နိုင်ပါ။
ဆိုင်မွန်သည် ၁၇ နှစ်အရွယ်အထက်တန်းကျောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများအပါအ ၀ င်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှသူမပြောခဲ့ပါကသူသည်ဂေးဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ, ထိုအားလုံးပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြောင်းပါပဲ။ (သင်စောင့်ကြည့်ပါတယ်ပြီးနောက် ချစ်, ရှိမုန် , Hulu ရဲ့အညီအမျှမူးရူးထိုက်သောနောက်ဆက်တွဲစီးရီးထွက်စစ်ဆေးသေချာပါစေ, ချစ်ခြင်းမေတ္တာဗစ်တာ ။ )
Alfonso Bresciani / CBS ရုပ်ရှင်
Stella (Haley Lu Richardson) နှင့် Will (Cole Sprouse) သည် cystic fibrosis လူနာများဖြစ်သည်။ သူတို့နာမကျန်းမှုများကြောင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မထိရန်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိဘဲခြောက်ပေအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းထားရမည်။ Stella သည်သူမကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီနေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသူသည်ဆရာဝန်၏အမိန့်ကို ၅ ပေခွဲခြားထားသည်။ coronavirus ကူးစက်ရောဂါ၏အသက်အရွယ်နှင့်ပတ်သက်။ ရွားလှအကျွမ်းတဝင်အသံ။
အဆုံးသတ်များဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးပမ်းရာတွင် Louisa Lou Clark (Emilia Clarke) သည်အလုပ်များကိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည်။ သူမ၏နောက်ဆုံးထုတ်အကျိုးပြုမှုမှာ Will Traynor (Sam Claflin) ၏ကြွယ်ဝချမ်းသာပြီးလေဖြတ်သည့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအသစ်လိုအပ်နေသူအတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
Daniel (Charles Melton) နှင့် Natasha (Yara Shahidi) တို့သည်ကမ္ဘာနှစ်ခုမှလာကြသည်။ သူ့အတွက်မိဘများစီစဉ်ထားသည်ထက်ဒံယေလသည်ပိုမိုအောင်မြင်လိုသော်လည်းသူမ၏မိသားစုအားပြည်နှင်ဒဏ်ပေးလိမ့်မည်ဟု Natashia ကစိုးရိမ်နေသည်။ သူတို့ကျပန်းတွေ့ပြီးချစ်ကြသောအခါ, မီးပွားပျံ။ (ဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါကအပေါ်အခြေခံပြီးရဲ့ နီကိုလာ Yoon အားဖြင့် namesake စာအုပ် ။ )
ဂျေမီ Randall (Jake Gyllenhaal) သည်သူ၏အမျိုးသမီး - မောင်းနှင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမျိုးသမီးများကိုကောက်နေပြanနာမရှိခဲ့ဘူးသူတစ် ဦး ချောမောဆေးဝါးအရောင်းစာရေးဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ပါကင်ဆန်လူနာတစ် ဦး ဖြစ်သူမဂ္ဂီ (အန်းဟတ်ဝေးဝေး) နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါသူသည်သူလာမည့်နေ့ကိုမတွေ့ရပါ။
သက်ဆိုင်သော: သင်ရယ်မောရန်လိုအပ်သည့်အချိန်အတွက်ရယ်စရာကောင်းသော Lady Movies
61 '' Sylvie ရဲ့မတ်ေတာ '
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် '' 50s ဝတ်စုံနှင့်ဂီတရမှတ်ကနေ Tessa Thompson ကနှင့် Nnamdi Asomugha ရဲ့လှပသောဓာတုဗေဒရန်, ဒီရုပ်ရှင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌မကျဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ Sylvie ရဲ့မတ်ေတာ ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Sylvie Parker (Thompson) နဲ့ Robert Halloway (Nnamdi Asomugha) တို့ကြားရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ jazz ဂီတပညာရှင်ကြားမှာအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
62 '' Southside သင်နှင့်အတူ '(2016)
အကယ်၍ မင်းဟာ Michelle Obama ရဲ့အရောင်းရဆုံးမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုလုံးလုံးလျားလျားဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီဆိုရင်၊ အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘားရက်အိုဘားမားနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းဘယ်လိုစတင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသင်ရရှိပြီးပါပြီ။ ဤချိုမြိန်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းတွင် Parker Sawyers နှင့် Tika Sumpter တို့သည်ချစ်သူစုံတွဲကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ထွက်ခွာသွားချိန်တွင်ဖော်ကျူးခဲ့သည်။
63. 'ချစ်ခြင်းမေတ္တာ' (2016)
အတ္ထုပ္ပတ္တိဆိုင်ရာဒရာမာသည် ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ Loving v ။ Virginia မှထင်ရှားသောတရားရုံးချုပ်မှတစ်ဆင့်မရေမတွက်နိုင်သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားသောစုံတွဲများအတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့သည့်တရားလိုများနှင့်ရစ်ချတ်နှင့်ဒေါက်တာဒက်ဗ်တို့၏ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်ရာဇဝင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
64. 'The Incredible Jessica James' (၂၀၁၇)
သူမရည်းစားဟောင်းနှင့်ပြိုကွဲပျက်စီးသွားပြီးနောက်ဂျက်စီကာဂျိမ်းစ် (ဂျက်စီကာဝီလျံ) သည်မဖြစ်နိုင်ဆုံးသူနှင့်အသစ်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဒါကမင်းကိုရယ်စေမှာပါ နှင့် ခံစားချက်အားလုံးကိုပေးပါ
65. 'အမြဲတမ်း' (2011)
ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့တောင်ကိုရီးယားဒရာမာဟာကားရပ်နားသူနဲ့အရင်မျက်မမြင်ကောင်မလေးတစ်ယောက်အတွက်လက်ဝှေ့သမားဟောင်းနောက်ကိုလိုက်တယ်။ ဒါဟာ tearjerker အချိန်လေးနှင့်ပြည့်စုံသောကြောင့်, တစ်ရှူးကိုပြင်ဆင်ပါ။
RELATED - အချိန်ကုန်ဆုံးအကောင်းဆုံးအချစ်ဆုံးဟာသ ၆၀
Categories ကျန်းမာရေး မိတ်ကပ် မိဘအုပ်ထိန်းခြင်း
ထိပ်တန်း 10 ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်